World Archives - Page 34 of 37 - Puntland Mirror Believable Media Website
Ugu yaraan shan akari oo booliis ah ayaa lagu dilay gudaha Maraykanka kadib markii si qarsoon loo toogtay. Madaxa booliska magaalada Dallas David O Brown oo ay toogashada ka dhacday ayaa saxaafada u xaqiijiyay in […]
Wiilka uu dhalay hoggaamiyihii hore ee dalka Libya Mucamar Al-Qadaafi ayaa u muuqda in xabsiga laga sii daayay, sida ay sheegayaan warbixino soo baxay. Sayf al-Islaam Qadaafi ayaa lagu xukumay dil toogasho ah sanadkii hore, […]
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyata ayaa cadeeyay in Raysulwasaaraha Israel uu u balanqaaday taageero haayadaha amaanka ee dalka Kenya. “Waxaanu samaysanay wada shaqayn weyn oo lagula dagaalamayo argagixisada waxaan si weyn uga faa’idaysan doonaa qorshaha […]
Booliska Jarmalka ayaa xiray 28-sanno jir jarmal ah oo looga shaki qabo inuu kamidyahay maleeshiyada al-Shabaab oo diyaarinayay ficilo rabsho leh, sida uu sheegay xeer ilaaliyaha Jarmalka. Ninka ay booliska xireen ayaa lagu magacaabaa Abshir […]
Dadka ku dhintay weerarkii isbiimaynta ahaa ee ka dhacay bartamaha caasimada Ciraaq, Baqdaad ayaa noqonaya weerarkii ugu dhimashada badnaa oo ka dhaca dalka Ciraaq tan iyo sanadkii 2003-da xilligii duulaankii Maraykanka. Dadka ku dhintay weerarka […]
Boqorka Sucuudi Caraabiya ayaa wacad ku maray in dalkiisa uu gacan bir ah uga hortagi doono kooxaha burcad diimeedka ah, maalin kadib markii dad naftood haligeyaal ah ay weerari isbiimayn ah ka geysteen saddex magaalo oo […]
Ugu yaraan afar qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay banaanka hore masjidka Nabiga ee Madiina
Ugu yaraan afar qof oo ay kamidyihiin labo ciidanka amaanka ah ayaa lagu dilay qarax ka dhacay banaanka hore ee masjidka Nabiga oo kuyaala magaalada Madiina ee dalka Sucuudi Caraabiya, sida ay sheegayaan wararka. Sawirada […]
Sucuudi Caraabiya ayaa iclaamiyay in beri oo Talaado ah ay tahay maalin Ramadaan lana dhamaystiri doono 30-ka bisha Ramadaan kadib markii ay galabta dhalanweyday bisha Shawaal ee Ciidul Fidriga. Dhamaan wadamada Islaamka ayaan laga arag […]
Raysulwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa galabta oo Isniin ah gaaray garoonka caalamiga ee diyaaradaha Entebbe ee magaalada Kampala wadanka Uganda si uu u xuso 40 sanadguurada kasoo wareegtay markii diyaarada Air France la afduubtay […]
Ugu yaraan 125 qof ayaa lagu dilay dad gaaraya 150 kalena waa lagu dhaawacay qarax ay sheegatay kooxda dowlada Islaamiga ah oo ka dhacay caasimada dalka Ciraaq, Baqdaad. Gaari walxaha qarxa laga soo buuxshay ayaa […]